Osisi Eyịm na-agba agba na-eri nri - Ezi Ntụziaka
i nwere ike ifriizi isi nke kabeeji
ebee ka m nwere ike izuta biskiiti uhie lobster uhie
esi esi nri ham na agwa na osi ite
kedu ka ị si esi mee okuko florentine
kedu ụdị nnu maka onye na-eme ice cream
Osisi Eyịm na-agba agba na-eri nri
Gaa njem na Outback na kichin nke gị site na nke a, nke a na-arụ n'ụlọ, nke dị mfe maka uzommeji yabasị!
Mkpụrụ osisi ndị a nwere ekpomeekpo nke yabasị anyị na-amasịkarị ma ọ na-ad ị mfe isi nri (ma rie) n'ụlọ. Mee ogbe dị ka oge maka egwuregwu buru ibu ma ọ bụ ihe nkiri n'abalị- anyị gụnyekwara ụzọ esi nri maka mmiri!
Gịnị bụ Osisi na-agbawa okooko?
Osisi na-awusa bụ yabasị nke a na-egbutu n'ime wedges (ọtụtụ n'ime ụzọ) wee gbue ya ma sie ya ike. Were ya dika nnukwu nnukwu yabasị mgbanaka .
Ọ bụ ezie na anyị na-enye iwu ịtụ nri a ka anyị soro ndị mmadụ nọ n'ụlọ nri, ha nwere ike ibu ma sie ike idozi n'ụlọ.
Anyị hụrụ n'anya igbutu yabasị n'ime mkpịsị osisi nke ọ bụla:
ha dị mfe ịkpụ na-enweghị ngwa ọrụ pụrụ iche achọrọ
ha dị mfe karị ighe-miri ma ọ dịghị achọ ka nnukwu ite mmanụ
anyị hụrụ n'anya ka ọhụụ dum nke yabasị si dị ma kpuchie ya
ha dị mma ijere ìgwè mmadụ ozi, ọ dịịrị ndị mmadụ mfe ijide obere petals karịa ịnwa ịnwa iwepụ nnukwu yabasị
esi esi nri beets na ngwa ndakwa nri
A na-ete eyịm ohuru na mmanụ a kara aka n’ime ha, etinyere n’ime mmanụ wee jiri ofe ya pụrụ iche wee jee ozi.
Eyịm Red eyịm nwere mellow ekpomeekpo mgbe odo eyịm dị nnọọ pungent. Anyị chere na nhọrọ kachasị mma bụ yabasị dị ụtọ dịka Walla Walla.
AKW .KWỌ Ntụ ọka, akwa, na mmiri ara ehi na-ekepụta ihe mkpuchi batrị zuru oke.
Oge Ntụziaka a nwere ogologo oge nke oge na ha na-agbakwunye nnukwu ekpomeekpo. Enweghi ike igbanwe ha site na ngwakọta ihe omuma gi kachasi nma taco sizinin ka Cajun sizinin .
Mmanụ maka ighe
Anyị na-achọ iji mmanụ nwere ezigbo anwụrụ ọkụ dị ka mmanụ canola, nke pụtara na ọ nwere ike iru ọnọdụ zuru oke (~ 400 Celsius) nke na-ebute ngwa ngwa na mpụta mpụga.
Ahụekere akwụ bụ ezigbo nhọrọ nwere ezigbo anwụrụ ọkụ na mmanụ ihe oriri ga-arụkwa ọrụ! Naanị ijide n'aka ijide n'aka na mmanụ ahụ na-ekpo ọkụ na ọnọdụ kwesịrị ekwesị tupu ị ghee ma ọ bụ na yabasị ahụ etinyere ga-eme ka mmanụ ahụ dị nro ma dịrị nro.
-esi mee ka ụlọ ahịa zụtara Pizza jikọrọ ọnụ crispy
Otu esi eme oria yabasị (nnyocha)
Bloom eyịm dị mfe ịme na ị ga-ahụ ụtọ ekpomeekpo na crunch!
Kwadebe uzomme nri ntinye n'okpuru ma wepụta ya (enwere ike ime ya ruo awa 48 tupu oge eruo).
Bee eyịm n'ime wedges. Kwadebe achicha achicha ma kpoo yabasị iji kpuchie ya.
Gbanye na ngwakọta akwa, wee laghachi na ngwakọta achicha (ntụ ọka / akwa / ntụ ọka).
Miri mmanu n'ime mmanu ruo mgbe aja aja na ahihia. Igbapu ma jee ozi na ntinye mmiri.
Etu esi emebe ofe ofe ofe
Ihendori anyị dị ụtọ nke nwere ude nke na ọ dịka ihe aioli. Dịrị ụtọ na fries, kwa, na ibu dị mfe iji mee:
Gwakọta ihe niile na-eme ka mmiri tinye nri wee wepụta ya.
Enweghi ike itinye obere ose cayenne ma ọ bụ obere maka spicier ihendori.
Etu esi agba ogwu oriọna yabasị
Kpoo oven ka o sie ya nri ma tinye ebe yabasị na-ata ahihia na akwa ahihia na mpempe mmiri. Sie ha ihe dika nkeji ato ma obu ano rue mgbe ha gha eghe.
Ma ọ bụ akpọọ nkụ na oven na 375 Celsius F ihe dị ka nkeji 5-7 ma ọ bụ ruo mgbe iwe dị ọkụ.
Nri ọkacha mmasị
Oporo mmanya - jiri oporo ohuru ma obu oyi oyi
Soy Ginger Steak na-ata ahụhụ
Air Fryer yabasị Mgbaaka
Ogige ohuru Bruschetta - na mfe ime
Cheeseburger juputara na ero
Ahụhụ Pretzel - zuru oke maka ụbọchị egwuregwu
Jalapeno Popper Dip - ìgwè mmadụ mmasị
You mere Ọrịa Onion ndị a? Jide n'aka na ịhapụ okwu na ọkwa n'okpuru!
5site na25votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu40 Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Zuru oke agwa ma ghere eghe ruo mgbe ọ ga - adị mma, a na - eji okpu onion Onyon na - acha ọkụ! Bipute Ntụtụ
▢1 buru ibu ụtọ yabasị ma ọ bụ 2 ọkara eyịm
▢abụọ iko ntụ ọka niile
▢1 ngaji ose talugwu
▢1 ngaji cumin ala
▢½ ngaji oregano
▢½ ngaji n'ala ose oji
▢abụọ buru ibu akwa
▢½ iko mmiri
▢mmanụ maka ighe
▢ nnu nnu
▢3 tablespoons Mayonezi
▢3 tablespoons kriim gbara ụka
▢abụọ teaspoons ketchup
▢1 ngaji horseradish Mayo ihendori ma ọ bụ mgbe horseradish
▢½ ngaji Worcestershire ihendori
▢¼ ngaji ose talugwu
▢¼ ngaji ose oji
Ikpokọta ihe niile na-eri nri ma wepụta ya.
Bee yabasị na ọkara kwụ ọtọ ma mee mpekere yabasị iji mee wedges. N'ime efere, ghaa ntụ ọka na ntụ ọka ma e wezụga nnu nnu. Na efere nke abụọ, hichaa àkwá, mmiri ara ehi, na mmiri.
Gbaa mbọ hụ na e kewara mpekere yabasị ma dowe yabasị wedges n'ime nnukwu akpa friza. Tinye ihe dị ka of iko ntụ ọka gwakọtara ya nke ọma.
Iji fọk, jiri nwayọ welie ihe dị ka 6 yabasị wee tinye ha na ngwakọta akwa. N'iji fọk, wepụ ha na ngwakọta akwa wee banye ngwakọta ntụ ọka na nnukwu efere ahụ. Na-eme ka mkpuchi. (Ya mere, ọ bụ ntụ ọka. Egg. Ntụ ọka.)
Tinye na ogbe mgbe ị na-ekpuchi yabasị niile. Jiri nwayọ kpoo akwa ahụ iji wepụ ntụ ọka buru ibu tupu ighe.
Kpoo ọkụ ma ọ bụ sentimita asatọ nke mmanụ na pan ruo 360-375 Celsius. Tinye yabasị n'ime frr miri emi ma ọ bụ mmanụ na obere ogbe ihe dị ka nkeji isii ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga-acha nchara nchara. Gbaa mbọ hụ na ịghara ime ka ha rikpuo.
Wepu na mmanu, kpochapu na akwa nhicha akwukwo ma fesaa ya na nnu. Ije Ozi na-ekpo ọkụ na-azọnye ihendori.
Enwere ike ịchekwa ihe ndị fọdụrụ n'ime ngwa nju oyi n'ime akpa ikuku ruo ụbọchị 3. Iji kpooghachi, gbanye n'ime oven ma ọ bụ ikuku ikuku maka minit 2-3 ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga-agba. Ihe oriri na-edozi ahụ maka 1/4 iko mmanụ. Nke a nwere ike ịdị iche na-adabere na ọnọdụ mmanụ na ole etinye obi gị dum.
Calorisị:Ogbe 544,Carbohydrates:61g,Protein:13g,Abụba:28g,Abụba Ajuju:5g,Cholesterol:Ogbe 105mg,Sodium:193mg,Potassium:Ogbe 369mg,Eriri:4g,Sugar:9g,Vitamin A:1565IU,Vitamin C:6mg,Calcium:136mg,Iron:4mg
Isiokwublooming yabasị, blooming yabasị ọtịta, blooming yabasị ata aru uzommeputa, esi mee ka blooming yabasị ata aru N'ezieAppetizer, Uzo oriri, nri Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Nweta ya site na Magazin Ntanetị Food !